Sidee baad u raadin kartaa cilmi-baarayaasha Amazon in ay ka caawiyaan nadaafadda ganacsigayga?
Weligaa ma yaabsan tahay sababta aad u baahan tahay inaad sameyso cilmi baaris iibiyaha Amazon? Waa faa iido faa'iido leh Amazon inta badan ma ogaanno. Xaqiiq ahaan, cilmi baaris iibiyaha Amazon wuxuu faa'iido u yeelan karaa macaamiisha iyo iibiyeyaasha. In this post gaaban, waxaan ka wada hadli doonaa awoodda cilmi-baarista iibiyaha Amazon iyo eegto dhow u ah qaar ka mid ah tricks xoogaa muhiim ah oo kaa caawin kara inaad kor u qaado iibinta iyo kor u qaadida garashada brand.
Sida loo sameeyo cilmi baaris iibiyaha Amazon?
Muhiim maaha waxyaabaha aad jeclaan lahayd inaad dalbato; waxaad hubtaa inaad ka hesho qaybta alaabooyinka aan dhammaadka laheyn ee ka jirta meheradda Amazon. Halkan waxaad ka arki kartaa ma aha oo kaliya alaabooyinka lagu iibiyo oo lagu fuliyo tafaariiqda laakiin sidoo kale dad kale oo badan oo bixiya in ka badan laba milyan oo iibiyeyaasha saddexaad iibiya. U isticmaalka mustaqbal raadinta Amazon, waxaad samayn kartaa cilmi-baaris iibiyaha Amazon oo aad u aragto ganacsiyadan shaqsiyaadka ah si la mid ah sida aad u heshid waxyaabaha ku yaalla goobta - vps unlimited bandwidth windows. Waxaa intaa dheer, waxaad gacanta ku hayn kartaa waaxyada ayadoo la adeegsanayo badeecadaha ganacsadaha iyo iibsadaha iibiya ee aad u baahan tahay dhinaca dhinaca bidixda.
Raadinta Amazon waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu dhejiyo raadintaada iyadoo la adeegsanayo noocyo kala duwan oo kala duwan oo kala duwan. Waxaa ka mid ah magacyada calaamadaha, midabada, iyo magacyada ganacsiga. Haddii aad jeclaan lahayd inaad iskaashi la samayso iibiyeyaasha la jecel yahay, waxaad u baahan tahay inaad raadiso calaamadda shirkadda kaas oo ah in lagu dhejiyo meesha ugu sareysa ee natiijooyinka raadinta oo la riixi karo si aad u gashid dukaanka alaabooyinka. Si aad u hesho ganacsade caadi ah, waa inaad doorataa mid ka mid ah badeecooyinka ku qoran liiska kadibna ku dheji magaca iibiyaha gudaha liiska alaabooyinka si loogu wareejiyo bogga ganacsiga.
Intaa waxaa dheer, Amazon waxay bixisaa liiska xarfaha ee ganacsatada qayb kasta. Halkan waxaad ka heli kartaa fikrad guud ee magaca ganacsiga. Si aad u hesho liiska ganacsatada, waxaad u baahan tahay inaad riixdo "dukaanka qaybta". Waxay ku taallaa dhinaca bidix ee bidixda ee bogagga badeecada iyo bogagga qaybta. Si aad u hesho natiijooyin sax ah, waa inaad ciriirsataa su'aalahaaga.
natiijooyinka raadinta iyo sida aad uga faa'iideysan karto URL-yada Amazon waxay si weyn u saameeyaan saadaalinta liiskaaga haddii aad si sax ah u isticmaasho.
Amazon URL wuxuu ka kooban yahay qaybaha soo socda - & goobaha muhiimka ah = keywords keywords nidaam raadinta u adeegsanaysa si loo eego su'aalaha user iyo natiijada raadinta. Qaybta koowaad ee URL kasta oo Amazon ah waxay u egyihiin "/ s / url = raadin-alias" waxaanay u adeegtaa si ay u xalliso natiijooyinka ugu fiican-iibiyeyaasha.
Taasi waa sababta kor loogu qaadayo boggaaga oo aad u keento heerka sare; waa inaad ka dhuumato URL-ka sidan hoos ku qoran:
https://www.amazon.com/s/?url=search-alias&field-keywords="a ee ereyada muhiimka ah. "
Markaad taabato badeecada bogga raadinta, waxaad kaloo fiirin kartaa URL dheer oo aan caddayn. Sidoo kale waa la hagaajin karaa si aad u keento darajada sare. Waxaad ubaahan tahay inaad ku darto ereyada muhiimka ah ee laguugu talagalay URL si aad u sameyso alaabtaada SERP. Waxaad samayn kartaa tijaabo si aad u qeexdo isku-xireyaasha URL-ka gaarka ah ee keenaya bogga aad rabto inaad aragto.
Muuqaal aad u muhiim ah oo aan u baahdo inaan sheego waa inaad ubaahan tahay "20 & character" halkii aad "+" dabeecad ahaan u kala saari lahayd shuruudahaaga raadinta adoo u galay URL-ka Amazon.